🥇 ▷ Dukaanka Google Play: 7 barnaamijkan Android ah ayaa adiga ku basaasaya ✅
Dukaanka Google Play: 7 barnaamijkan Android ah ayaa adiga ku basaasaya
Duqa Magaalada July 22, 2019 saacadu markay tahay 5 ilaa 33 daqiiqo
in Google Play Store ay dejiso 7 barnaamij oo Android ah oo leh xaddidan oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku basaasaan. Waad ku mahadsan tahay, qofkastoo raaci kara ficilada yaryar ee dhibbanayaashooda: goobta, wicitaanada / SMS, farriimaha shabakadaha bulshada, iyo macluumaadka kale ee shaqsiyeed.
Kooxda amniga ee taleefanka gacanta ee Avast ayaa aqoonsatay 7 basaas app on Play Store. Dhamaan waxa soo jeediyey soo-saareyaasha Ruushka, waxaa la rakibay wax aan ka yarayn 130,000 jeer ka hor intaan Google mamnuucin. Laba ka mid ah ayaa ka caan ah kuwa kale: Spy Tracker iyo SMS Tracker, oo mid kastaaba lagu rakibay in ka badan 50,000 jeer. Wax shaqo ah kuma lahan barnaamijka cusub ee Android 1325 ee hadda la helay ee nuqubaya macluumaadka shakhsiga ah.
Dukaan-Play Store: Google wuxuu reebay 7 dalab oo basaasiin ku sameeya isticmaaleyaasha
Iyada oo loo marayo barnaamijkan Android, basaasa taleefannada casriga ah Waa ciyaar carruureed. Waxay ku xadgudbaan dhammaan shuruudaha isticmaalka. Dukaanka Google Play. Sida laga soo xigtay Avast, horumariyehu wuxuu u sharxay isticmaaleyaasha sida loogu rakibo codsiyada taleefanka casriga ah ee dhibbanayaasha, iyo sidoo kale sida loo hubiyo inaan la helin. Codsiga wuxuu u gudbin doonaa macluumaadka cinwaanka emailka basaas: taariikhda wac, goobta, SMS / MMS iyo macluumaadka kale ee shaqsi ee adeegsadayaasha gaarka ah.
Warbixintii ugu dambeysay ee Kaspersky Lab, shirkadda amniga waxay ku andacootay in basaasiin lagu rakibay inka badan 58,000 oo taleefanno gacmeed Android ah 2018. Si loo isticmaalo barnaamijkan, Waa inaad marin u hesho taleefanka gacanta ee dhibbanaha.. Ugu yaraan hal mar si ay u fuliyaan rakibaadda lagama maarmaanka ah iyo qaabeynta si ay ugu shaqeeyaan si habboon. Codsigan waa mid aan dhaqan gal aheyn oo dhibaato ku ah asturnaanta shaqsiyeed mana aha in lagu daro Google Play StoreAvast ayaa lagu sheegay boostada.
Dhamaan toddobada barnaamij ayaa ku jira Dukaanka Ciyaaraha iyagoo leh magacyada soosocda: Raadinta Shaqaalaha Xaqiiji Spy Work, Track Kids Tracker, Raadiyaha Taleefoonka gacanka, Raadiyaha Taleefoonka, Raadiyaha Tracker, Taleefanka SMS, Taleefoonada Shaqada Khadka Tooska ah ee Shaqaalaha. Dhammaantood waa laga saaray dukaanka toddobaadkan iyada oo ay ugu wacan tahay iskaashiga u dhexeeya Avast iyo Google.